एकै ओभरमा ४३ रन ! | Hamro Khelkud
एजेन्सी – क्रिकेटमा एकै ओभरमा कति रन सम्म बन्ला ? जो कहिले पनि भन्ने गर्छ कसैले ६ छक्का हान्न सके ३६ रन बन्छ नि । तर विश्व क्रिकेट जगतको लिष्ट ए खेलमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ ।
न्युजिल्यान्डका ब्याटम्यान जो कार्टर र ब्रेट हेम्पटनले एकै ओभरमा ४३ रन बनाएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । न्युजिल्यान्डको लिष्ट ए को खेलमा नर्थइरन डिस्टिक्स र सेन्टरल स्टागसबीचको खेलमा यो रकर्ड बनेको हो । यो रेकर्ड डिस्टिक्सका ब्याटम्यान हेमिल्टन र कार्टरले बनाएका हुन् ।
पहिलो बलमा चौका प्रहार हुँदा अन्य दुई बलमा लगातार नो बलमा दुई छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै दोस्रो बलमा छक्का हुदा तेस्रो मा एक रन लिएका थिए भने अन्य तीन बलमा लगातार तीन छक्का हान्दै एकै ओभरमा ४३ रन बनाउन सफल भएका हुन् ।
एकैओभरमा ४३ रन बनाएपछि ५० ओभरमा डिस्टिकले ७ विकेट गुमाउदै ३ सय १३ रन बनाएको थियो । ३ सय १४ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको सेन्टरलले ९ विकेटको क्षतिमा २ सय ८८ रन मात्र बनाउन सक्यो । डिस्टिक्स २५ रनले विजयी समेत भएको छ ।